Dowlad degaanka Soomaalida oo soo bandhigay Ciidamo la dagaalamaya TPLF - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon Dowlad degaanka Soomaalida oo soo bandhigay Ciidamo la dagaalamaya TPLF
Dowlad degaanka Soomaalida oo soo bandhigay Ciidamo la dagaalamaya TPLF
Waxaa Maanta tababar loogu soo xiray Ciidamo farabadan oo ka tirsan dowlad degaanka Soomaalida xerada tababarka ciidanka ee Shaalaqe Khadar Maxammuud Fadal ee degmada Birqod ee gobolka Jarar ee dowlad degaanka Soomaalida.
Ciidamadaan oo markii hore ahaa maleeshiyaad ayaa hadda kamid noqday Ciidamada rasmiga ah ee dowlad degaanka Soomaalida, waxaana munaasabadda tababarka loogu soo xirayay ka qeyb galay Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxummed Cumar, hoggaanka Xafiiska Nabadgelyada DDS, Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo ay weheliyaan masuuliyiin kale oo heer deegaan ah.
Ciidamadaan oo uu tababarka u socday muddooyin billooyin ah ayaa waxaa laga soo kala aruuriyay dhammaan gobollada, maamul-magaalooyinka iyo degmooyinka Deegaanka, waxaana intooda badan la barayay dhawrista sarraynta sharciga.
Madaxweyne Mustafe Muxummed Cumar ayaa sheegay in dawladdu ay ka go’an tahay kor-u-qaadidda nolosha ciidanka maleeshiyada, islamarkaasina hadda la kordhiyey mushahaarka ciidanka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay jiraan isku-dayo ay wadaan TPLF oo kaashanaya xubno ku sugan Deegaanka, kuwaasi oo abuuraya isku-dhacyo qabaa’il, dib-u-deegaamayn hor leh iyo arrimo kale oo la mid ah, taasi oo la doonayo in lagu khal-khaliyo shacabka, balse ciidankani looga baahan yahay ka-hortagga ficillada ka dhanka ah xasilloonida shacabka.
Maamulka dowlad degaanka Soomaalida ayaa horay waxaa ay Ciidamo farabadna ugu direen Magaalada Adiis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya,kuwaas oo loo qorsheeyay inay qeyb ka noqdaan dagaalka dowladda Federaalka Itoobiya ay kula jirto Kooxda TPLF.